Mee na emela ezumike ezumike dị ka 99designs | Martech Zone
Abalị na-agbachi nkịtị, ndị dreidels na-akpọ nkụ, ndị ahịa gị na-emeghe obere akpa ha. Ọ bụrụ na ị nwere ike ime ka gị ika akụkụ nke ha ezumike oge a eke na maa mma ụzọ, ha ga-echeta gị nke ọma n'ime New Year. Ndị a bụ ụfọdụ ihe na-enye aka na-eme ma ọ bụrụ na ị ga - enyere gị aka ịnyagharịa oge.
Mee: jigide eziokwu gị
Ọ bụrụ na ụdị mgbasa ozi gị na-ahụkarị jokes, tweeting si sappy ozi jupụtara na obi ụtọ na ezumike ga-akụ ndị na-ege gị ntị dị ka ndị na-adịghị mma. Buru akara gị n'uche ka ị na-ahụ ezumike. Mepụta mpempe n'ime kaadị ezumike gị ma ọ bụrụ na ị na-ekwukarị ọchị. Ma ọ bụrụ na ị nọgide na-enwe ụda ụlọ ọrụ dị oke egwu n'afọ ọzọ, jigide mmetụta sitere n'ezi obi ma ọ bụ ọchị ọchị G na ngwa ezumike gị.
Emela: hapụ onye ọ bụla
N'agbanyeghị ihe Hallmark ga-ekwe gị, ọ bụghị mmadụ niile na-agba Krismas. Dabere na piwu Research, Pasent 92 nke ndị America na-eme ezumike ahụ. Ọ gwụla ma akara gị ọ dabere n'okwukwe, debe ahịa ezumike gị ka ọ bụrụ ihe niile iji mee ka ndị na-ege gị ntị 100%. Kpọsaa "ire ere ezumike" karịa "Ahịa Krismas," zipụ kaadị na-akpọsa "Obi Everythingtọ Niile" ma ziga ozi na ọwa mgbasa ozi gị na-eme ememme ezumike ọ bụla ka ọ na-abịarute.
Inye onyinye ebere bara uru maka karma gị na akara ala gị. Ọ bụ ụzọ iji wepụta aha gị n’obodo gị ma mee ka ndị ọrụ gị nwee obi uto maka ịrụ ọrụ maka ezigbo ụlọ ọrụ.
Etinyekwala mgbasa ozi ọ bụla ma ọ bụ nke ịzụ ahịa na ezumike gị na -eme mbọ; ọ dị mma na uzo. Mana ị nwere ike ịchọta ụzọ iji jikọta ozi gị na enyemaka gị. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ eserese nwere ike ịnye hazie ma bipụta mmemme maka mmemme ezumike nke obodo ma ọ bụ mee asọmpi edemede nke na-enye ndị ọrụ ọchụnta ego webụsaịtị onyinye n'efu.
Mee ka ndị ọrụ gị tinye aka na ya! Jụọ maka echiche ha banyere ụzọ iji nyere obodo a aka n’oge ezumike a. Inwere ike iwere ezinulo ndi nọ ná mkpa n’obodo ma nye ha onyinye na nri, ma ọ bụ nye ndị ọrụ ụgwọ ụbọchị ezumike iji wepụta onyinye iji mechie onyinye maka ọrụ ebere mpaghara ịkesa.
Emela: gafee mmiri
Ezumike ezumike dị adị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe mmetụta na ike gwụrụ ka December na-aga n'ihu. Ejila ihe ncheta email zụọ ndị ahịa gị ma ọ bụ jụọ ndị ọrụ gị ịhapụ Saturday ọ bụla iji rụọ ọrụ na mkpọsa ebere gị. Maka ihe niile dị nsọ, emela ka ndị ọrụ gị rụọ ọrụ n’oge mgbede Ekeresimesi ma ọ bụ Abalị Ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere ya aka. Akụkụ nke ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ gị na-adabere n'ịdebe ezigbo ndị ọrụ obi ụtọ.
Mee: zipu ezigbo kaadị
Dị ka ozi ejula na-aga n'ụzọ nke dinosaurs, izipu ezigbo kaadị na-enye gị ohere ịpụ na mkpọ ma mee obere ahịa. Mepụta kaadị mmapụta, tinye mgbaghoju anya nke na-ekpughe ozi ezumike ma ọ bụ chịkọta mkpokọta mara mma nke ụmụaka ndị ọrụ na anụ ụlọ na-eyi okpu ezumike. Nka a ozi puru iche banyere ndị ahịa gị na azụmahịa gị, ma ọ bụ nye ihe ndị na-ege gị ntị nwere ike iji. Gụnye coupon nke dị mma na Jenụwarị ma ọ bụ magnet fridge pụrụ iche.
Emela: gbaa oriri ngwọrọ
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa azụmahịa nke otu onye, ​​kwa abalị nwere ike ịbụ nnọkọ ụlọ ọrụ ezumike gị. Ma na otu ìgwè buru ibu, ịtụba ihe omume ezumike nwere ike inye aka wusie mmụọ mmụọ ike - ọ bụrụhaala na ndị mmadụ chọrọ ịga. Hazie ọrụ a na-adịghị ahụkebe, dị ka egwuregwu nke egwuregwu mkpado laser ma ọ bụ bowling. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nọ na otu gị nwere mmasị ị getụ mmanya ya, gaba na ebe a na-eme biya ma ọ bụ mmanya. Gbalisie ike na ndị na-achọghị isonye na mmemme ahụ ka nwere ike ịga ma nwee anụrị.
Ọ bụrụ na mmefu ego gị ga-enye ohere maka ime ụlọ ezumike, tụlee ịhapụ ya kpamkpam. Kama nke ahụ, hapụ ndị ọrụ ka awa ole na ole tupu oge agafee ma nyefee kaadị onyinye ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ. Ndị chọrọ ịga oriri na ọnụ, ndị ọzọ nwekwara ike ịnụ ụtọ oge ahụ.
Kpebisiri ike ime oriri na ọ traditionalụ officeụ nke ọdịnala? Mee atụmatụ ya n'abalị Fraịde na nso mbido ọnwa Disemba. Oge izu ụka na-esiri ndị nne na nna ọrụ ike ịchịkwa, ndị ọrụ nwere ike ịnwe atụmatụ ndị ọzọ ka ọnwa na-eru nso.
Mee: gbanye oghere gị
Dị ka Whos ala na Whoville, wepụta ihe ịchọ mma gị n'ụzọ zuru oke. O nwere ike iju gị anya na ị ga-anabata ọfịs ọfụma ọ bụla ga-enwe ọfụma ole ma ole na ole, ụfọdụ yi osisi, Ọkụ kandụl na snowflakes na-egbuke egbuke gbara gburugburu.
Na-eche ihe kpatara na ị ga - echegbu onwe gị ịchọ mma ma ọ bụrụ na ndị ahịa anaghị abịakarị n’ọfịs gị? Debe foto nke ihe ịchọ mma gị na ntanetị mgbasa ozi gị iji gosipụta mmụọ mmemme gị. I nwekwara ike ime ka ndị na-ege gị ntị bịakwute gị site na ịhazi nri, uwe ma ọ bụ onyinye onyinye. Nye obere Kupọns ma ọ bụ uru ndị ọzọ iji gbanwere onyinye. Ndị ọrụ gị nwere ike ijikwa nkwakọ ngwaahịa na nnyefe nke onyinye, mgbe ndị ahịa batara, ihe ịchọ mma gị ga-adọrọ mmasị gị ma nwee ike ilele ọrụ ị nwere ike ịnye.
Otu ndumodu: Ọ gwụla ma ị na-agba ọsọ egwuregwu, mistletoe enweghị ọnọdụ n'ọfịs.
Tags: mee na emelaezumikeezumike kaadịezumike ezumike